पूर्वयुवराज पारश शाहसंग पोखरामा जहाँपनि देखिने यी युवती र बाबु को हुन्...? - Filmy News Portal Of Nepal
पूर्वयुवराज पारश शाहसंग पोखरामा जहाँपनि देखिने यी युवती र बाबु को हुन्…?
धेरैलाई थाहा छ पूर्व युवराज पारस शाह अहिले पोखरामा छन् । ल’कडाउन अघि पोखरा पुगेका उनी अहिले त्यहाँ नै रमाएर बसेका छन् । उनी थुप्रै नेपालीको टिकटकमा छाइरहेका छन् । टिकटकमा आफु अब काठमाडौ नफर्किने पोखरामा नै बस्ने भन्ने गरेका छन् । यहाँहरुलाई पारस शाह भिजे तथा मोडल सोनिका रोकायासँग मुस्ताङ घुम्न गएको खबर भाइरल भएको थाहा नै छ ।
उनी मुस्ताङ हेलिकोप्टरमा उडेर गएको भिडियो आएको थियो । यति मात्र हैन उनीसँगै हेलिकोप्टरमा अर्की एक युवती थिइन् । साथमा एकजना बच्चापनि थिए । त्यसपछि पारस बेला–बेला उनै युवतीसँग पोखरा बजारमा बारम्बार देखिन्छन् । उनीसँगै एकजना सानो बाबुपनि देखिन्छन् । बाबुसँग पारस निक्कै झम्मिएको देखिन्छ । उनीहरुलाई आफ्नो बाइकमा लिएरपनि हिँडिरहेको देखिन्छ ।
सामाजिक सञ्जालमा पारससँगै देखिने उक्त युवती खुबै जम्ने गरेको भेटिएको छ । उनी टिकटकमापनि छिन् । बेला–बेला उनी पारस शाहको बा १९ प २९२ नम्बरको लक्जरी बाईकमापनि देखिन्छन् । सामाजिक सञ्जाल टिकटकमा पारस शाहको बाइक चलाउँदै । बाईक चलाउँन सिक्दै भनेर लेख्छिन् । त्यहाँ पारसले बाइक थामेर सिकाइरहेको देखिन्छ ।
पोखरामा पारस शाह रा’हत वितरण गर्न पुग्छन् । त्यहाँ सँगै हात पक्रिएर कालो चस्मा लगाएर उनी देखिन्छिन् । मुस्ताङ जानु अघि पोखरामा उनै सोनिका रोकाय र पारससँग उनी एक होटलमा बसिरहेको देखिन्छन् । उनको सम्वोधन देख्दा पारससँग झुम्मिरहेका बालक उनै युवतीका छोरा हुन् भन्ने अनुमान गर्न कुनै गाह्रो हुन्न ।
ती बालकलाई पारस आफ्नो बाईमा राखेर घुमाइरहेका हुन्छन् । अनेक ठाउँमा उक्त बालकसँग पारस खेलिरहेकोपनि देखिन्छ । जहाँ जाँदापनि सँगै देखिने तर राजपरिवार सदस्य नभएकी ती युवती को हुन् त ? सायद सबैको चासो होला । यसैले हामीले खोजी गरेका छौ । टिकटमा उनी इएसएचए डट एजी युजरमा छिन् । उनका झण्डै १ लाख फलोअर्स छन् । १५ लाख भन्दा माथी भिडियो लाईक छ । फेसबुकमा तृष्णा अग्रवाल नाममा भेटिन्छिन् । उनले फेसबुकमा एउटा पोष्ट गरेकी छिन् ।
मैले पनि अहिलेको ट्रेण्ड अर्थात् बाजे बजई को अनुसारले थर लेख्यो भने मेरो रियल नाम थर यस्तो पो हुने रहेछ । तृष्णा शाहीठकुरी गिरी अग्रवाल । अब मेरो छोरी को बिहे पछी छोरीको कति लामो हुने हो ? यसले के देखाउँछ भने उनी शाही ठकुरीकी छोरी हुन् । अग्रवालसँग बिबाह गरेकी छिन् । उनका एक छोरी र एक छोरा छन् । यसले उनीहरुबीच पारिवारिक सम्बन्धपनि छ भन्न सकिन्छ ।
उनले फेसबुकमा नै दाजु बहिनीको माया भन्दै पूर्व युवराज पारस शाहसँग भाइटिका लगाएका तस्विर पोष्ट गरेकी छिन् । नेपाली टोपीमा सजिएर खिचिएको त्यो तस्विर भाईटिकापछि खिचिएको हो भन्ने सजिलै अनुमान लगाउँन सकिन्छ । यसैले उनीहरुको नाता सम्बन्ध दाजु बहिनीको छ भन्न सकिन्छ । भाईटिका लगाएको तस्विरमा उनले लेखेकी छिन् । दाजु बहिनीको सम्बन्ध रगतले मात्र तय गर्दैन ।
The bond betweenabrother and Sister is not decided by blood , It is enternally blessed 🙏🙏 यहाँ के प्रष्ट हुन्छ भने पारसले यी युवतीसँग बहिनीको सम्बन्ध बनाएका छन् । पूर्व राज ज्ञानेन्द्रका छोरी एक जना मात्र हुन् । अर्थात पारस शाहकी बहिनी प्रेरणा राज्यलक्ष्मी शाह हुन् । ३० डिसेम्बर २०१९ को पारस शाहको जन्मदिनमा उनै तृष्णाका साथमा पारस, छोरी पूर्णिका, अर्की छोरी र छोरा ह्दयन्द्र सहित पारिवारीक जमघटपनि देख्न सकिन्छ ।